Sidee Golfka uqalmayaan tartanka Masters
Sidee Golfo u Qalqaali Karaan Ciyaaraha Masters tartanka
18 Shuruudaha U-qalmitaanka ee u hoggaansamaya marti-qaadka Masters
Masters Golf Masters waa farsamo ahaan casumaad. Laakiin taasi macnaheedu maaha in xubin ka mid ah xubnaha golaha Qaranka ee Augusta ay ku fadhiistaan ​​oo ay go'aansadaan cidda ciyaareysa iyo kuwa aan lahayn. Waxaa jira shuruudo u qalma in lagu ciyaaro The Masters, iyo golf kubbeddel ah mid ka mid ah shuruudahaas ayaa si toos ah ugu qalma in lagu helo martiqaad.
Haddaba, maxay yihiin shahaadooyinka Masters? Isbedelada iyo isbeddellada shuruudaha u qalmidda ayaa la sameeyey wakhti ka dib, laakiin shuruudaha shuruudaha Masters ee ugu dambeeyay ayaa hoos ku taxan.
Waxaa jira 18 ka mid ah; waxay ku taxan yihiin qaabka iyo wejiga geeska ah, oo ay la socdaan, mararka qaarkood, sharaxaad yar ama sharaxaad.
Martiqaadka Masters ayaa tag ...
1. Horyaalka tartanka Masters
Haddii aad ku guulaysato The Masters, waxaad heli kartaa ka dhaafid nololeed si aad u sii wadato ciyaaro tartanka ilaa inta aad jeceshahay. Horraantii 2000-kii, taas oo ku saabsanayd isbeddel - da'da da'da 65-sano-hoos-hoosaadka ayaa loo qorsheeyay in ay dhaqan-galiso laga bilaabo 2004, iyada oo ay weheliso heerarka ugu yar ee ka-qaybgalka. Hase yeeshee, xukunkan ayaa la joojiyay ka hor inta uusan dhaqan galin ka dib markii uu kufarsameeyey Jack Nicklaus iyo Arnold Palmer .
Si kastaba ha ahaatee, maanta kooxda heysata horyaalnimada horyaalka ayaa ah, "ku dhiirigelisay" inay joojiyaan ciyaarta marka ay gaaraan dhibco ay ku dhalin karaan magacooda.
Sidaa darted, inta ay ka dhiman tahay noloshii nolosha ee horay loo soo dhaafay, ayaa ah shuruudaha u qalmiddaas inay ahaato in jadwalka hore la ciyaari karo Masters ilaa iyo inta aysan ka baqeynin naftooda ama tartankooda dhibco xun.
2. Shantii tartan ee Horyaalka Mareykanka
Si aad uhesho qaab kale, golbe ku guuleysta US Open wuxuu helayaa 5 sano oo ka-dhaaf ah Masters.
3. Shanta horyaal ee ugu caansan British Open
4. Ku guuleystey shan ka mid ah kuwa ku guuleysta PGA Championship
Xaalad kasta oo weyn, shan sano ka dib, ka-dhaafitaanku wuxuu noqonayaa mid sharaf leh oo aan tartan lahayn. Taas macnaheedu waa guuleystayaasha kale ee waaweyn ayaa weli muujin kara Augusta National inta lagu guda jiro Masters, oo ku tababaraya koorsada, waxay u saxiixaan tartanka Par-3 haddii ay doonayaan, laakiin lumiyo ka dhaafitaanka Masters Tournament lafteeda.
5. Seddexdii ku guuleystey tartanka ciyaartoyada
Mastaafurin 3 sano ah oo ka baxsan mid kasta oo ku guuleysta Ciyaartoy Ciyaarta , si kale haddii loo dhigo.
6. Horyaalka Mareykanka ee ugu sareeya ee hiwaayadda iyo tartanka
Maraykanku wuxuu hiigsanayaa tartanka ciyaaraha, sidaas darteed geli ciyaarta ciyaaraha - xitaa haddii aad lumiso - wuxuu kuu geynayaa The Masters. Si kastaba ha noqotee, golf-yada ee u qalma qaybtan waa in ay ahaadaan kuwo hiwaayad ah waqtiga Masters; isugudbinta nacaybku wuxuu ku baaqayaa martiqaadka Masters.
7. Horyaalka Ingiriiska ee hadda ah
Sida qalinjabiyaha Maraykan ee Maraykanka, champ the British Amateur waa in uu weli yahay hiwaayad waqtiga Masters. Si ka duwan US Cafis aan laga saarin, kaliya kaliya British ah (championka) ma helin casuumaad Masters.
8. Horyaalka Asia-Pacific Amateur ee hadda
9. Horyaalka Latin America ee hadda jira
Ka-dhaafitaanada ku guuleysta tartanka Asian-Pacific Amateur iyo Latin American Amateur Championship waa kuwa ugu dambeeyay ee lagu darey liiska shuruudaha u qalmidda Masters. Xaqiiqdii, Augusta National Golf Club wuxuu ahaa qalab loogu talagalay bilowga tartanka, iyaga oo u adeegsanaya in ay ka caawiyaan inay koraan golfaha juquraafi ahaaneed iyo sii wado "caalamiya" Masters Field.
10. Horyaalka Maraykanka ee hadda ah ee hiwaayadda
Heerka Isboortiga ee Maraykanka wuxuu u furan yahay golf-yahanka hiwaayadda ee da'doodu tahay 25 iyo ka weyn. Saameynta shuruudahan uqalmaashu waxay tahay in la helo hiwaayad xirfadeed oo lagu galo garoonka Masters sannad kasta.
11. 12ka ciyaaryahan ee ugu horreeya, oo ay ku jiraan xiriirka, sannadkii hore ee tartanka Masters
Haddii aadan ku guuleysan karin Masters, waxaad wali xaqiijin kartaa inaad ku soo noqoto sanadka soo socda adigoo dhameystiraya gudaha Sare 12.
12. Ciyaartoygii ugu horeeyay, oo ay ku jiraan xiriirka, sanadkii hore ee US Open Championship
13. Afartii cayaartood ee ugu horeysay, oo ay ku jiraan xiriirka, sannadkii hore ee tartanka British Open
14. Ciyaartoyda ugu horeeya, oo ay ku jiraan xiriirka, sannadkii hore ee PGA Championship
15. Abaalmarinta Munaasabadaha PGA Tour kuwaas oo abaal marin buuxda u qoondeynaya tartanka Xilliga tartanka xilli ciyaareedka, laga bilaabo Masters Masters ilaa hadda Masters
"Qoondaynta buuxda" waa furaha, waana dhibcaha FedEx Cup oo looga hadlayo halkan.
Bandhigyada banaanbaxa ee tartanka PGA Tour (kuwa ciyaaray isbuucii kale ee tartanka kale, tartanka waa weyn) ma siin doonaan dhibco buuxa oo FedEx Cup ah. Sidaas awgeed mid ka mid ah dhacdooyinka hoose ee dhibcaha ah ma qaadaan si toos ah galitaanka Masters.
16. Kuwa u qalma sanadka soo socda tartanka Tournament
Xiriirka Tour Tournament ayaa ka kooban 30ka kooxood ee ugu sareysa kubadda cagta ee FedEx Cup.
17. Hoggaamiyayaasha 50-ka ee ugu sarreeya heerka ugu dambeeya ee loogu talagalay Golfka ee sanadka hore
18. Hoggaamiyayaasha 50-aad ee ku-meel-gaarka ah ee Koobka Kubadda Caadiga ah ayaa la daabacay inta lagu jiro todobaadka ka hor Mawduuca hadda Masters
Sidoo kale ogsoonow in Guddiga Masters ee Guddiga Qaranka ee Masters inay xaq u leeyihiin inay ku casumaan xulal kasta oo caalami ah oo aragtidiisa ku haboon oo aan u qalmin.
Shahaadadan Masters waxay badanaa keenaan tartan tartan ah 90 ilaa 100 ciyaartoy.
Muxuu yahay Qiimaynta Koorsada iyo Qiyaasta Bannaanka ee Augusta Qaranka?
1977 British Open: Watson Boosto Nicklaus ee 'Duel in the Sun'
Sidee Xeerka Cutubku wuxuu uga shaqeeyaa tartanka British Open Golf
1991 Open Open: Ian Baker-Finch Major
10 Ciyaartoyda Ugu Fiican ee Kubadda Cagta ee Ryder
1998 US Open: Janzen Gets Stupid ka wanaagsan ... Mar labaad
1934 Koobka PGA: Gaaban-Hitter wuxuu ku garaacayaa Long-Hitter
Miyuu Ciyaartoyda Kubadda Ciyaaruhu u qalmaa in lagu magacaabo Muhiim?
PGA Tour: Tour Tournament
Dean & DeLuca tartanka casriga ee PGA Tour
Diiwaanka Dalxiiska ee PGA: Dhibicda Hole-72
Maxaa Acid ku jira Sisir?
Lady Dai's Bury Cawl ah - 2,200 Year Abrasion Old Burial Burial
Sababta Why Churchill Lost Doorashadii 1945
Curtis Strange, Mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiicnaanta Golf ee 1980a
Barafka Jannada ee Santa Barbara, California USA
Ka hadalka shaqada
Naqshadaynta Naqshada Sawirrada Nalalka fudud
Dhaqdhaqaaqa Haweenka ee Fanka
Dalbashada dharka Faransiiska
Talooyin ku Saabsan Maamulaha Dugsiga Cusub Sannadka Sannadka Koowaad
Jaamacadda Qarsoon ee Bret Easton Ellis Novels
Iskuulada Penn State Altoona
Taariikhda Canshuurta Dakhliga ee Maraykanka
Qiimaha Quoddhaafka ah ee ku Saabsan Warqadaha Qorshaha Muuqaarka
Doorashada Tikidhada Caruurta
Sidee Xadhkaha Madow Cunnoodaan?
Sunta Lunar: Sida ay u dhacaan
Dib u eegid: John Legend - "All All Me"
Sidee Arteryka Lafaha ee Sare ugu Sameeya Dhiiga Sambabka
Jumlada jireed (naxwaha)
Samee Aragtida Siyaasadda Siyaasadeed
Gemini Guy - Isku Beddelka
Pluto ee Noocyada Taranka